Fiteny amin'ny fiteny natoraly dia ny sampan'i fahaizana artifisialy izay mifandraika amin'ny famoronana, ny fahazoana ary ny famakafakana ireo fiteny ampiasain'ny olombelona voajanahary mba hifandraisana amin'ireo solosaina amin'ny fomba fiteny sy fomba fiteny amin'ny alàlan'ny tenin'olombelona voajanahary fa tsy ny fiteny computer. fahaizana artifisialy dia ny injeniera sy ny siansa amin'ny fananganana sy fananganana programa sy milina informatika manan-tsaina. Tsy mametra ny tenany amin'ireo teknika azo zahana ara-biolojika ary mifandraika amin'ny hevitra fampiasana solosaina hahatakarana ny fahaizan'ny olombelona.
Ny fomba fiasa farany mankany amin'ny NLP dia mifototra amin'ny milina fianarana, izay ampidirina ao amin'ny fianarana milina miaraka amin'ny famahanana hetsika sy tsy misy hetsika ary avy eo dia mandeha ho azy ny asa nefa tsy mila fitsabahan'olona na tanana. Machine fianarana dia namela solosaina hahita fomba fijery miafina, amin'ny alàlan'ny algorithman izay mahazo imbetsaka amin'ny data omena azy ireo, nefa tsy voarindra mazava tsara hoe aiza no hitadiavana. Ny ankamaroan'ny fikarohana atao amin'ny Ny fanodinana fiteny voajanahary Mihodina amin'ny fikarohana, indrindra orinasa karoka Ny fahaizan'ny programa informatika mahatakatra ny fitenin'ny olombelona araka ny itenenana azy.
NLP matetika antsoina hoe computational linguistics dia manana asa sasany tafiditra ao anatin'izany ny antsoina hoe fitrandrahana entity, lalina Analytics, fanasokajiana fehezanteny, famahana hevitra miaraka, fametahana ampahany amin'ny kabary, ary famafazana. Io no sehatra mifantoka amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny solosaina sy ny fitenin'olombelona. Mipetraka eo amin'ny sampanan'ny fahaizana artifisialy, linguistics computational, ary science science. Ho an'ny fikarohana rehetra ampiasaina Ny fanodinana fiteny voajanahary, ny programa dia hanaiky ny fehezanteny na fanafohezana. Ny fanamby dia ny hoe tsy maintsy takatry ny solosaina ny fomba fampiasan'ny olombelona sy ny fianarany ilay fiteny. Ny fitenin'olombelona dia sady tsy tsotra no tsy mazava. Mba hahafantaran'ny solosaina ny fitenin'olombelona dia mila takatrao ny hevitra sy ny fifandraisany amin'ireo teny hamoronana fehezan-teny misy dikany. Ohatra, Diniho ity fehezan-teny iray ity: «Ny zazakely mitelina lalitra». Ankehitriny, mety misy dikany isan-karazany izany ka mahatonga azy io ho sarotra amin'ny programa mba hahatakatra ny tena dikany ambadiky azy. Toy ny teny hoe manidina na mitelina dia ampiasaina ho verbe, izay mahatonga ny zaza ho toy ny adjectif na anarana. Mandritra ny fifandraisan'ny olombelona, ​​ny dikan'ireo fehezanteny ireo dia miankina amin'ny fahatakarana ny maha-diso ny olona tsirairay amin'ny fitenin'olombelona sy ny toe-javatra nampitana azy. Eo no tokony hametrahana programa hanaovana rindrambaiko hahafantarana ireo rafitra momba ny fiteny sy ny toe-javatra.
AI dia ho fomba vaovao indrindra hifaneraserantsika amin'ny gadget rehetra; ny fiaranay, ny vata fampangatsiahana, ny finday avo lenta, ny varavarana fidirana ary ny rafitra fanamainana afovoany. Honina ao anatin'ny tontolo iray tsy mitsahatra isika. Ny fanaovana ireo gadget ananantsika mba haminavina ny fikasantsika sy hahatakatra ny toe-javatra misy antsika amin'izao fotoana izao no raikipohy amin'ny fananganana vokatra tena atidoha. 'Zavatra' an'arivony tapitrisa izao no mangataka fanohanana avy amin'ny AI sehatra.